Gym 10 minitra isan’andro ho an’ny tarehy dia tsy misy kentrona
Manamafy sy mampifintina ny hoza-tsandry
Ilaina ny mikolo ny hoza-tsandry mba tsy hiroraka izany sy hifintimpitina tsara. Hanampy anao amin’izany ireto fampihetseham-batana manaraka ireto :
Manala kibo, dabilio no ampiasaina
Mila ovaovaina ny karazana fampihetseham-batana atao mba handaitra lalandava izany. Ireto atolotra anao manaraka ireto dia manala ny tavy eo amin'ny kibo sady manamafy ny hoza-kibo Mila dabilio na seza lavalava, mari-toerana sady misy tongony ho an'ireo fampihetseham-batana rehetra atao anio.
Mba hanemorana ny fipoiran’ny kentrona amin’ny tarehy dia tsara ampanaovina “gym” koa ny tarehy. 10 minitra isan’andro ihany no ilainao hanaovana izany :
Mila mijoro manoloana fitaratra rehefa hanao ireto « gym » ho an’ny tarehy ireto. Mijoro mahitsy tsara dia miaina milamina tsara. Atao miadana avokoa ireo fihetsika rehetra dia averina in-5 avokoa.
Manamafy ny tenda : Mijery any ambony toy ny hijery ny tafo. Somary alefa mankany aoriana ny soroka. Akarina ny saoka mba ho heno mihinjitra ny tenda kanefa tsy tokony hiforitra be ny hatoka. Tazonina hahitsy koa ny lamosina.
Sokafana miadana ny vava dia akatona avy eo. Apetraho eo ambanin’ny soroka ny tanana mba hahatsapanao ny hozatra mihenjana rehefa manao ilay fihetsika.
Manatsotra ny handrina : Ampidino moramora ny volomaso fa aza ampifanakaikezina kosa. Somary akipy toy ny tsy mahita alavitra ny maso rehefa hanao azy ity amin’izay mora ny mampidina azy. Akipy ny maso avy eo fa kendrena tsy hisy hikentrona mihitsy ny handrina na kely aza. Apetrao eo amin’ny fanambonin’ny handrina ny tanana raha ilaina. Akarina ny volomaso avy eo. Tokony ho kendrena tsy hiforitra hatrany ny handrina.
Manamafy ny hozatry ny tarehy rehetra : manonona litera indray eto :
Manonono hoe : A sady mihomehy : sokafana be ny vava sady manonona A dia mitsiky miadana mba hanokafana ny vava ho lehibe kokoa. Arahina amin’ny tanana izay fihetsika izay mba tsy hisy hiforitra eo amin’ny takolaka. Akatona moramora ny vava avy eo.
Manonona ny E miaraka amin’ny oroka : Tazonina amin’ny tanana roa ny tarehy dia manonona ilay litera E sady aroso be toy ny handeha hanoroka ny molotra. Ajanona rehefa mitady hikentrona ny manodidina ny molotra. Tazonina tsara ny takolaka mba hanohitra ilay fihetsika.
Manonona ny I sady mitsiky : Tazonina amin’ny tanana roa ihany ny tarehy eto sady atao mahitsy tsara ny lamosina. Atao mitsiky mian-dalana ny molotra rehefa hanonona I. Tsy sokafana ny vava. Kendreo tsy hisy kentrona hipoitra amin’ny andaniny roa amin’ny orona.
Manonoa ny O sady manao toy ny gaga : Tazonina amin’ny tanana roa hatrany ny takolaka. Sokafana be ny vava sady manonona O no atao mifanakaiky araka izay tratra ny molotra no aroso manoloana koa.
Manonona ny U sady manao toy ny tezitra : Somary ahemotra mankany aoriana ny loha eto mba somary hisintona ny tenda. Akarina moramora ny saoka, toy ny hidongy ireny rehefa manonona ilay litera. Toy ny U mivadika no ataon’ny vava ka ny molotra ambony no tokony handroso sady tsy miforitra.